आज हामी "Varfeys" पासवर्ड परिवर्तन गर्न कसरी कुरा हुनेछ। हामी बहु अनलाइन शूटर बारेमा कुरा गर्दै छन्। Warface तीन स्टूडियो कम्पनी Crytek विकास गरे। परियोजना को सबै भन्दा युक्रेनी शाखा सिर्जना गरिएको थियो।
"Varfeys" पासवर्ड परिवर्तन गर्न कसरी प्रश्न गर्न गर्नुअघि, खेल कथा बारे केही शब्द भन्नुहोस्। Blackwood - एक आतंकवादी संगठन। यो गिनी मानिसहरूलाई हतियार तस्करी, हत्या, परीक्षण मा लगे र भ्रष्टाचार फैलाउन छ। उनको दस्ते Warface, संसारमा शत्रु को प्रमुख स्थान विज्ञप्ति जो Confronts।
हामी पासवर्ड परिवर्तन गर्न "Varfeys" जस्तै, प्रश्न गर्न बारी। सबै को पहिलो, परियोजना को आधिकारिक वेबसाइटमा व्यक्तिगत खाता मा जानुहोस्। हामी ट्याब "मेरो प्रोफाइल" बारी। प्रेस "परिवर्तन" बटन। हामी अर्को चरणमा अगाडि बढ्नुहोस्। "पासवर्ड परिवर्तन" को प्रयोग गरेर। त्यहाँ एक नयाँ विन्डो हुनेछ। यसलाई हामी एउटै पासवर्ड प्रयोग गर्न आमन्त्रित गरिन्छ। यो चरण प्रणाली आक्रमणकारीले को खाता होल्डर भेद गर्न सक्षम थियो त आवश्यक छ। अर्को चरणमा, हामीले नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। हामी क्याप्चा प्रवेश गरेर, मानव जाति हौं भन्ने पुष्टि गर्नुहोस्। कि पछि, हामी मेल जाँच गर्नुहोस्। हामी यो खेल खाता जोडिएको छ कि ठेगाना हो यो मामला मा रुचि थियो। हालको मेलबक्स बारेमा जानकारी प्रोफाइल मा उपलब्ध छ। यो पत्र मा, हामी नयाँ डाटा देख्ने छ। तपाईंको खातामा फोन नम्बर बाध्यकारी हो भने, सूचना पनि यसमा जानेछ। बधाई छ, आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन हुन्छ। हामी खाता मा परिष्कृत गोप्य संयोजन प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। सबै को सबै भन्दा राम्रो, पासवर्ड फरक रजस्टर र संख्या मा अक्षरहरू समावेश गर्दछ। यो दृष्टिकोण खाता सम्भव चोरी तिरस्कार गर्छन्।
अब छलफल गरौं कसरी आफ्नो पासवर्ड रिकभर गर्न को "Varfeyse" मा। खाता सम्झौता गरिएको छ भने, परियोजना को आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्। त्यहाँ हामी पहुँच पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु विशेष पृष्ठ हो। फील्ड इमेल र पासवर्ड निर्दिष्ट गर्नुहोस्। अर्को, हामी परियोजना देखि एक पत्र आशा, र समस्या हल सम्म निर्देशन, therein पालना गर्नुहोस्। थप गम्भीर उपाय चोरी-मेल को मामला मा आवश्यक छ। दर्ता मोबाइल फोन नम्बर निर्दिष्ट थियो भने, त्यसपछि यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। त्यसैले, हामी एउटा सन्देश को रूप मा रिकभरी लागि अनुरोध। यदि फोन तपाईंको खाता बाँधिएको छैन, सबै फिर्ती मेल पहुँच को पहिलो। अर्को खेल समस्या सुलझाने जाने छ। त्यसैले हामी "Varfeys" पासवर्ड परिवर्तन गर्न कसरी बाहिर समझ।
कसले Contra सांप: तागत र नायक को कमजोरी
शूटर - यो के हो?
सिस्टम आवश्यकताहरु "Stalker: Chernobyl को छाया" र खेल समीक्षा
खेल मा उच्च elves: सबै प्रकार को कैरेक्टराइजेशन
ताराहरू भनेर हामी veschuyut: कुंभ पुरुष अनुकूलता र Scorpio महिला
अप्रत्याशित नतिजा मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स: मूल्याङ्कन र समीक्षा
अस्पताल "स्पार्क" (Strelna, सेन्ट पीटर्सबर्ग): आवास, भोजन, उपचार र आराम। बाल आर्थोपेडिक्स र Traumatology को पुनर्वास केन्द्र
मेरो जिब्रो कसरी पियर्स गर्न? यो प्रक्रिया को सुविधाहरू
प्याज सूप आहार: केहि आफूलाई सीमित छैन
खरबुजा लागि आसान चक्कु: राम्रो र छिटो कटौती
स्पेन Outlets: मा रूसी किनमेल
एक निर्धारण बाहिर लेखन को आधारभूत नियमहरू